आस्था राउत छुटेपछि सुगम पोखरेलले भने : बाघ पल्केको छ, अर्को पालो मेरो पनि हुनसक्छ ! – Khabar Silo
आस्था राउत छुटेपछि सुगम पोखरेलले भने : बाघ पल्केको छ, अर्को पालो मेरो पनि हुनसक्छ !
Posted on January 28, 2020 January 28, 2020 Author admin Comment(0)
काठमाडौ – अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी गायिका आस्था राउत चार हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् ।
आस्था राउत रिहा भए संगै गायक सुगम पोखरेलले एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै बाघ पल्केको छ पालो जसको पनि आउँछ भनेका छन् ।
सुगम पोखरेलले आफ्नो नयाँ गितको भिडियो रिलिज कार्यक्रममा संचारकर्मीहरुको प्रश्नमा भने, “आस्था राउतले गल्ति गरेकी थिईन र उनले आफ्नो गल्ति स्वीकारे पछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई राख्न जरुरी थिएन । मैले स्ट्याटस राखेर समेत भनेको छु कि बाघ पल्केको छ मेरो पालो कि तपाईको पालो जहिले पनि हुनेछ ।”
सुगम पोखरेलले कलाकार भएपनि भीआईपी जस्तो हामीले खोज्नु हुन्न जस्तो लाग्छ भन्दै सुगम पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । सुगमका अनुसार आफुले त्यसरी आस्थाको जस्तो व्यवहार सहनु नपरेको तर आफु सधै सतर्क भने रहेको बताएका छन् ।
दिपक–दिपा लागे “छन् गेडी सबै मेरी” तिर
एक पछि एक गर्दै सफलता हासिल गरिरहेका दिपक–दिपाको टिमले अर्काे नयाँ चलचित्र निर्माण गर्ने भएका छन् । यो टिमले “छ” नामबाटै नामाकरण गरिएको चलचित्र “छन् गेडी सबै मेरी” अर्काे वर्ष प्रदर्शनमा ल्याउने भएको हो । चलचित्रलाई “झ्यानाकुटी” फेम्ड निर्देशक सिमोस सुनुवारले निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रको लगानी पनि निर्देशक कै रहनेछ । दिपक–दिपाको टिमले चलचित्रको नाफाको […]
Posted on March 4, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सैफअली खानले १९९१ मा अभिनेत्री अमृता सिंहसँग विवाह गरे । आफूभन्दा १२ वर्ष जेठी अमृता सिंहसँग उनी २० वर्षका थिए । यो विवाह करिब १३ वर्षसम्म अघि बढेको थियो । यसबिचमा दुबैका दुई सन्तान छोरी सारा अली खान र छोरा इब्राहिम खान भए । २००४ मा सैफ र अमृताको सम्बन्धबिच्छेद गरे […]
बक्स अफिसमा ‘तानाजी’को बोलबाला, पिकेसहित ९ सफल फिल्मको रेकर्ड ब्रेक
‘डियर कमरेड’की हिरोइन् रश्मिका, यस्तो छ उनको सफलताको उकाली